Thomas Lemar Sheeko dhalasho sheeko xambaarsan Xaqiiqooyinka sawir la'aanta
Home CIYAARAHA CADAADADA EE EUROPEAN Ciyaartoyda Kubadda Cagta Faransiiska Thomas Lemar Sheeko dhalasho sheeko xambaarsan Xaqiiqooyinka sawir la'aanta
LB wuxuu soo bandhigayaa sheekada Full Story ee kubadda cagta ee ugu wanaagsan ee loo yaqaan Nickname; 'Mr Versatile'. Dabeecadeena Thomas Lemar-da Caruurnimada iyo wixii macluumaad ah ee aan la isku qorin waxay kuu keenayaan xisaab buuxa oo ah dhacdooyin la taaban karo laga bilaabo wakhtiga carruurnimada ilaa taariikhda. Falanqaynta waxay ku lug leedahay sheekadiisa noloshiisa ka hor caan, nolosha qoyska iyo kuwo badan oo OFF iyo ON-Pitch xaqiiqda yar ee la yaqaan ee ku saabsan isaga. Thomas Lemar waa mid ka mid ah guryaha ugu qaalisan ee xagaaga suuqa kala iibsiga 2017. Hadda, sii wad.
Thomas Lemar Sheeko dhalasho sheeko dheereeya Xaqiiqooyinka diinta: Nolosha Hore
Thomas Lemar wuxuu ku dhashay 12th November ee 1995 ee jasiiradda Carribean Baie-Mahault, Guadeloupe, taas oo ah dhul ka mid ah Faransiiska. Guadeloupe waa jasiirad la yaab leh oo loogu talagalay keenista kubadaha kubadda cagta ee kubadda cagta ee Faransiiska. Magacyada sida muuqata Thierry Henry iyo Alexandre Lacazette Dhammaantood waxay leeyihiin hiddahooda jasiiradda. Waalidiintooda oo dhan waxay u haajireen Faransiiska oo ka tagay jasiirad yar oo jilicsan oo ku taal Faransiiska West Indies.
Thomas Lemar Sheeko dhalasho sheeko dheereeya Xaqiiqooyinka diinta:Nolosha Xiriirka
Waqtiga qoraal ahaan, Thomas Lemar wuxuu shaaca ka qaaday inuu xiriirkiisa u leeyahay inuu noqdo Single. Taas macnaheedu waxa weeye ma jiro xiriir la xaqiijiyay ama saaxiibo kale oo gabdhaha ah. Isagu ma laha wax carruur ah.
Thomas Lemar Sheeko dhalasho sheeko dheereeya Xaqiiqooyinka diinta:Style of Play
Lemar waa ciyaaryahan khadka dhexe ah oo awood u leh inuu ciyaaro labada garab iyo sidoo kale bartamaha iyo doorka xorta ah. Waxa uu inta badan ka tagay cagta, laakiin sidoo kale wuxuu awood u leeyahay cagtiisa midig. Waxa loo arkaa xirfadihiisa qumman ee fiican, awoodda gudbinta xoogga leh iyo laad xor ah. Waxa uu sheegay inuu jecel yahay inuu isku xiro asxaabtiisa kooxda, halkii uu ka qaadan lahaa daafacyada: "Waxaan isku dayayaa in aan ka fogaado khatarta iyo xoogga saaro in la maro iyo dhaqdhaqaaqa inta ugu badan ee suurtogalka ah."Wuxuu inta badan isku dayi doonaa inuu gool dhaliyo muddo dheer wuxuuna dhaliyay goolasha 14 ee 55 soo muuqday xilli ciyaareedkii 2016-17 waxaana ku jiray 17.
Waxa uu ku ciyaaraa madaxiisa, cagtiisa bidixna waa awood ujeeda - marnaba uma muuqan inuu wax badan dhibsado, inkastoo uu ku garaaci karo ciyaartoyda qatarta ah, wuxuu heystaa baasas aad u fiican oo uu u isticmaalo khatarta mucaaradka.
Thomas Lemar Sheeko dhalasho sheeko dheereeya Xaqiiqooyinka diinta:Xirfadda Soo-koobista
Wax soo saarka nidaamka dhalinyarada Caen, Lemar wuxuu kulankiisii ​​ugu horeeyay u ciyaaray furitaanka xilli ciyaareedka 2013 / 14 bishii August 2013.
Waxa uu ku biiray 31 muuqaal guud oo loogu talagalay SMC, ka hor inta uusan xiiseyneynin inuu ka ciyaaro Europe - wuxuu ku xiran yahay wararka xanta ah ee Chelsea, waxaana lala xiriirinayay Liverpool, Lyon iyo Bordeaux, laakiin wuxuu door biday inuu u dhaqaaqo Monaco £ 3.4 million ee 2015.
Wuxuu wakiil ka yahay Faransiiska heerkiisii ​​oo dhan laga bilaabo U17 illaa U21 wuxuuna sameeyey kulankiisii ​​ugu horeeyay ee caalamiga ah ee 2016 Ivory Coast.
Tan iyo markii uu ka soo degay Caen, 21-sano jir wuxuu ku ciyaaray meelo kala duwan oo khadka dhexe ah.
Thomas Lemar Sheeko dhalasho sheeko dheereeya Xaqiiqooyinka diinta:Ligue 1 Trophy
Waxaa laga yaaba, Kylian Mbappé, Tiemoué Bakayoko iyo Bernardo Silva ayaa laga yaabaa in ay ka heleen qadar weyn oo ah kuwa indha indheynaya. Laakiin kaalinta Lemar ee Monaco oo ku guuleysatay Ligue 1 iyo inay gaarto semi-finalka Champions League lama dhimi karo.
Wuxuu kooxdiisii ​​ku hogaamiyay inay ku guuleystaan ​​horyaalka Faransiiska xilli ciyaareedkii hore (2017 / 2017) waxayna gaareen semi-finalka Champions League, iyagoo garaacaya sida Manchester City iyo Borussia Dortmund.
Thomas Lemar Sheeko dhalasho sheeko dheereeya Xaqiiqooyinka diinta:1 Tabaruce, xoog badan
Inkastoo uu ku ciyaarayo garabka, hadana uma uusan barbareynin sida saaxiibadiisa Benjamin Mendy iyo Mbappé, laakiin uma baahnid. Lemar wuxuu jecel yahay in uu isku xiro oo uu ciyaaro hal mar laba baaskiil oo uu u isticmaalo dhaqdhaqaaqa iyo khatarta ah inuu keeno si uu u furo meel bannaan.
Ma jiro nin Monaco ah oo ciyaaro dheeri ah ka ciyaara xilli ciyaareedkii 2016 / 2017 marka loo eego Lemar, waxaana uu sidoo kale sameeyay 2.2 ka badan mid ka mid ah saaxiibadiisa. Ciyaartoyda si joogta ah uga soo ciyaaray Ligue 1.4, kaliya xulalka kaliya ee weerarka Radamel Falcao (1), Valere Germain (2.8) iyo Mbappe (1.8) ayaa ka badan goolasha goolasha kulan kasta oo ka badan Lemar's 1.8.
Xusuusnow, waxay aheyd 21-sano jirka ah oo ka caawiyay Tottenham inay ka soo baxdo Champions League iyadoo goolkaasi uu ka dhaliyay.
Thomas Lemar Sheeko dhalasho sheeko dheereeya Xaqiiqooyinka diinta:Aabihiis, oo xakameynaya xijaabtii Asal
Sida laga soo xigtay GFFN, Lemar aabihiis ayaa doonaya inuu sii joogo Monaco, xittaa uu saxiixo qandaraas kordhin si uu 21 u helo fursada ugu fiican ee uu u heli karo xulka France ee Koobka Aduunka ee 2018.
Wararka xanta ah ee suuqa kala iibsiga xagaaga ee 2017. Waxay soo jeedisay in Edwige uu rabay wiilkiisa inuu 'diido' Arsenal. Xilliga qorista, Arsenal ayaa lagu soo waramayaa inay ku soo laabatay Monaco iyagoo dalab rasmi ah ku dalbaneysa xiddiga garabka ka ciyaara ee 40m ka dib markii dalabyo kale oo ay ku dalbanayeen 31m ka dibna ay ku iibsadeen £ 35m. Si kastaba ha ahaatee, waxaa la sheegayaa inay diyaar u yihiin inay u dhaqaaqaan 50m.
Su'aashu waa; Ma dooneynaa Arsene Wenger inuu kufsado £ 50m - in ka badan Mesut Ozil - maadaama uu doonayo inuu keydka keydka ku sii jiro inta badan xilli ciyaareedkan?
Thomas Lemar Sheeko dhalasho sheeko dheereeya Xaqiiqooyinka diinta:Waa maxay sababta Liverpool u doorato Salah halkii Lemar
Haa, way jecel yihiin Salah, laakiin waxay dareemeen inuu shaqo badan oo wanaagsan uu ku leeyahay weerarka dhanka weerarka kaliya marka uu boos u heysto, sababtoo ah qadarkiisa. Ma laha taabasho la isku halleyn karo sida Lemar. Waxay u maleynayaan in lemar ay ka faa'iideysan karto baska.
Sababta ugu muhiimsan ee ayan u tagin waa sababta oo ah wuxuu ahaa mid aad u qaali ah. Waxay dareemeen in Monaco aysan waligeed ku iibineynin qiimaha raqiis ah. Waxay u baahdeen inay isku xakameeyaan iyaga oo ku soo gabagabeynaya Lemar waxaa laga yaabaa inuu ka fiican yahay kubada marka uu ka maqan yahay. Waxay aaminsan yihiin inay heystaan ​​ku filan Lallana, Coutinho, Gini iyo Firmino oo sidoo kale kubada ku fiican.
Waxa ay u baahnaayeen ayaa ahaa ciyaaryahan kale oo kubada ku ciyaari kara islamarkaana difaacaya. Salah waa ninkaas. Lemar, iyaga ayaa ah AM AM marka loo eego inuu yahay LW.
Thomas Lemar Sheeko dhalasho sheeko dheereeya Xaqiiqooyinka diinta:Waxyaabaha kale ee lagu yaqaano
Qaab ciyaareedka Lemar ayaa aheyd had iyo jeer Andres Iniesta, waxaana uu muujinayaa. In kastoo xirfadihiisa uu ku fiican yahay, ma ahan mid lagu diidan yahay inuu qaato daafacyada, lakiin waxa uu diirada saaraa ciyaaraha kooxda.
Laurent Koscielny Childhood Story Plus Xaqiiqooyinka Wada-noolaanshaha